Daawo: Golaha Shacabka BFS oo maanta yeeshay kulankoodi labaad ee kalfadhiga lixaad – Walaal24 Newss
Daawo: Golaha Shacabka BFS oo maanta yeeshay kulankoodi labaad ee kalfadhiga lixaad
October 21, 2019	Off	By walaal24
Kulanka maanta oo uu shir guddominaayay ku simaha Guddomiyaha Golaha Shacabka ahna Guddomiye ku xigeenka kowaad ee Golaha Shacabka Mudane Cabduweli Ibrahim Muudey ayaa ugu horeyn cod loogu qaaday xubin Magacaaban oo ka mid noqonaya Guddiga Madax Banaan ee Doorashoyinka Qaranka.
kulanka maanta oo ay soo xaadireen 143 Xildhibaan ayaa meelmarita ujeedooyinka kulanka kadib u codeeyay in Mudane Aadan Cabdinaasir Maxamed uu ka mid noqdo Guddiga madaxbanaan ee doorashooyinka Qaranka.
Dhamaan Xildhibaanadii soo xaadiray kulanka ayaa cod rabitaan ah ku meel mariyay xubintii ka banaaneed Guddiga doorashooyinka Qaranka.
Intaa kadib Xildhibanada ayaa u gudbay akhrinta 2aad Hindise Sharciyeedka Dakhliga, sidokalana waxaa horyaala Dib ugu Noqoshada akhrinta Miisanaiyadda 2019-ka, iyadoo loo qeybiyay Axdiga ilaalinta Hanti-dhaqameedka Xilliyada Colaadaha.
Madaxweyne Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa u amba-baxay Dalka Ruushka
Maxaa laga xasuustaa Dowladdii Kacaankii Siyaad Bare maanta oo kale?
Golaha ammaanka ee QM oo muddo kordhin u sameeyay howlgalka midowga Africa
Qaramada Midoobay oo sheegtay iney kaalmo u direyso degaanada Wabiyada ku fatahmeen
Dhageyso: Guddiga joogtada ah ee Golaha Aqalka sare oo maanta arrimo muhiim ah ka hadlay
Dhageyso: Xubno Aqalka Sare ka mid ahaa Guddigii loo Xilsaaray Xalinta Khilaafaadka Golaha Shacabka oo is casilay
Dhageyso: Ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliyeed oo Al-shabaab kala wareegay deegaanka Moqokori
Dhageyso: Axmed Madoobe oo ka Jawaabka bixiyey Saraakiishii NISA ee ay dib u soo celiyeen
Daawo: Agaasimaha Shirkadda DP World Suldaan Ahmed Bin Suleymaan “heshiiskaas dowladda Federaalka Soomaaliya uusan waxba ka quseyn isla markaana Soomaaliland ay tahay dal Madax Banaan”
Daawo: Gudoomiye Waafow oo booqasho ku tagay Dekeda macmalka Ceel jaale ee Degmada Marka